ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ (ရုပ်သံ)
လက်ပံတောင်းတောင် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 9:09 AM
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီကို ဘယ်သူ.မျက်နှာမှ
မထောက်ဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်
ရွက်နိုင်သူ များနဲ. ပြန်ဖွဲ.သင်.ပါတယ် ၊
.... အရင်က တရုတ်ပြည်မှာ စစ်ပွဲတွေပြီး လို.တိုင်းပြည်
ထူထောင်စမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို.လုပ်ရာမှာ ခက်ခဲခဲ.တယ် ၊ နောက်ဆုံး .. သူခိုး မိရင် .. တစ်ရွာလုံး
လာကြည်.ခိုင်းပြီး ... အားလုံးရှေ.မှာ ပစ်သတ်တယ် ၊
အလုပ်မလုပ်နိုင် တော.တဲ. ဘိန်းစားတွေလည်း ဒီလိုဘဲ ၊
နောက်တော. သူခိုး ၊ ဘိန်းစားတွေ အတော်နည်းသွားတယ် ၊
.... ဆိုလိုတာက တရုတ်မှာ လိုလုပ်ရမယ် မဟုတ်ဘူး ၊
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီ က Sharp ဖြစ်တယ်
ဆိုရင် (ဥပမာ) ဘယ်တရားသူကြီး ၊ ဘယ် ရဲစခန်မှူး ဥပဒေ
ချိုးဖေါက်လို. အရေးယူလိုက်ပြီ ၊ တင်ပြလိုက်ပြီ ဆိုတာ
မျိုးတွေ Media တွေ မှာ ပါနေရမှာ ၊
.. ၁ လ ၊ ၂ လ လောက်ပါဗျာ ။ ဥပဒေမဲ. လုပ်တာတွေ
အထိုက်အလျောက်တော. လျော.သွားမှာပါ ၊
အဲ .... ဒီလိုလုပ်မရဘူး .. ၊ တစ်စုံတစ်ရာ (...) က ခံနေ တယ် ဆိုရင် အဲဒါကို တိုင်းပြည်ကို ပြောင် ... အသိပေးသင်.တယ် ။
အဲလိုလုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အခုချိန်မှာတော့ တရုတ်နဲ့နှိုင်းလို့ မရဘူးထင်ပါတယ်။ တရုတ်က ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဆိုတော့လေ..။ ခက်တာက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မတီက အရေးယူအပြစ်ပေးမှုတွေ လုပ်ခွင့်အာဏာ မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့က လက်ရှိအစိုးရအပေါ်ပဲ မူတည်မယ်ထင်ပါတယ်။ အာဏာရ အစိုးရကသာ ဒါတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် အစိုးရက အပေါ်ယံလောက်ပဲ လူမြင်ကောင်းယုံ ဟန်ဆောင်လုပ်ပြနေသမျှတော့ ဒုံရင်းအတိုင်းပဲ သွားနေမှာပါပဲ။ လက်ပံတောင်းတောင်ပဲကြည့်လေ..။ ကော်မတီက ဘာတွေပဲ တင်ပြပြ တကယ်လုပ် မလုပ်က အစိုးရအပေါ်မှာပဲ မူတည်တာပါ။ အမြင်လေး ၀င်ပြောကြည့်တာပါဗျာ...။
တရားဥပဒေ အမှန်တကယ်စိုးမိုးရေးအတွက် အစိုးကိုတိုင် က လိုက်နာကျင့်သုံးပါမှ အများပြည်ကလည်း ယုံကြည်ကိုးစားမှာပါ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီကို ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ဖွဲ့ ထားပေရုံနဲ့ မဖြစ်သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
ပြည်သူတွေ တကယ်အားကိုးယုံကြည့်မှတကယ့် ခေါင်းဆောင်စစ်ပါ။
အခုတော့ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်း ။ လက်ပူမှ နားရွက်ကိုင် ။
အကျိုးအပြစ် စဉ်းစားပြီးမှ ဆောင်ရွက်သင့်တာပါ။
သနားစရာအကောင်းဆုံးက ခေတ်တခု စနစ်တခုမှာ အသုံးချခံ ဝန်ထမ်းနဲ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သံသရာကိုကြည့် ကြပါ အရင်ဘဝမကူးပါဘူး ဒီဘဝမှာပဲ
ခင်များတို့ ပြောသလို တရားဥပဒေစိုးမိုရေး ကော်မတီကို ပြန်ဖွဲ့ ခိုင်းတာ ဟုတ်ပါပြီ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်အမေစုတောင် မယုံဘုးဆိုရင် ခင်များတို့ ကို ဘယ်သူ့ ကို များ ယုံကြည်ကြမှာလဲ။ကိုမင်းကိုနိုင်လား၊ကိုကိုကြီး ကိုလား၊ဒါမှမဟုတ်ခင်များကိုယ်တိုင်လား(Hurricane Sandy)ကိုမေးချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။
"သိန်းစု ပေးတဲ့ လူထုဘဝ